Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Mey 2019 à 11:55
271 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Aprily 2018 à 15:23 (hanova)
k (Nanao fanitsiana)
Endrik'io pejy io tamin'ny 21 Mey 2019 à 11:55 (hanova) (esory)
Ny [[Bokin'ny Jobily|'''Bokin'ny Jobily''']] dia boky tsy hita afa-tsy ao amin’ny [[Baiboly ortodoksa|Baiboly ortodoksa etiopiana]]. Ny tanjon’ilay boky dia ny hamporisika ny [[Jiosy]] amin’ny fifikirana amin’ny [[Torah]] (Lalàn'i Mosesy), amin’ny fotoana nahatonga ny Jiosy hiharan’ny kolontsaina jentilisa.
Misy ny tantaran’izao tontolo izao (ny niandohany sy ny hiafarany) araka ny nitantaran’ny “anjelin’ny fanatrehana” an’izany tamin’i [[Mosesy]] teo amin’ny [[Tendrombohitra Sinay (Baiboly)|tendrombohitra Sinay]] io boky io. Ny ampahany be amin’ny fitantarana, izay miendrika angano, dia manampy ny fitantarana ao amin’ny [[Bokin'ny Genesisy]] sy ny [[Bokin'ny Eksodosy]] (hatramin’ny toko faha-12) mba haneho ny maha ambony lanja indrindra ny Torah. Voatantara ao hatramin’ny [[Famoronana (finoana sy fedrà)|Famorona]] izao tontolo izao ka hatramin’ny nanorenana ny fetin'ny [[Paska jiosy]]. Voaresaka koa ny amin’ireo Patriarka hebreo. Ny fahotana nataon’ny [[Hebreo (mponina)|Hebreo]] izay voasoratra ao amin’ny Baiboly dia tsy voaresaka firy ao. Ahitana lohahevitra momba ny [[Andro farany|fiafaran’izao tontolo izao]] (apokaliptika sy [[Eskatolojia|eskatolojika]]) ny ao amin’ilay boky ka ahafahana mahazo bebe kokoa ireo lohahevitra eskatolojikan’ny boky ao amin’ny [[Testamenta Taloha]] sy [[Testamenta Vaovao]]. Asehon’ny boky fa ireo Patriarka dia efa nanaja ny [[Lalàn’i Mosesy]].
Ny Bokin’ny Jobily dia tsy hita na ao amin’ny Baiboly hebreo ([[Tanakh]]) na ao amin’ny [[Septoaginta]] na Septanta koa io boky io. Ny Katolika sy Protestanta ary ny Ortodoksa tatsinanana, dia manasokajy azy ho [[Apokrifan'ny Baiboly|apokrifa]] na pseodepigrafa.
Mahazo ny lanjany manokana ao amin’ioamin’ny bokyBokin'ny ioJobily ny amin’ny fito herinandron-taona (49 taona) izay itsinjarany ny fotoana tantarainy ka io fe-potoana izay atao hoe ''jobily'' no nanomezana anarana an’ilay boky. Atao hoe '''''Genesisy Kely''''' noho izy mandray na manova fotsiny ny fomba filaza ao amin’ny Bokin’ny Genesisy na koa mameno izay banga ao. Anaran’io boky io koa ny hoe '''''Testamentan'i Mosesy''''' na '''Apokalipsan'i Mosesy'''. Ao amin’ny Baiboly ortodoksa etiopiana izy dia atao hoe koa '''''Bokin'ny Fizaràna''''' (amin’ny [[fiteny gezagezy]]: መጽሃፈ ኩፋሌ / ''Mets'hafe Kufale''), izany hoe ny fizarànan’ny fotoana ho 49 taona izay mbola mizara ho fito taona fito.
== Ireo hevi-dehibe ==
=== Ny fizaram-potoana atao hoe ''Jobily ''===
Ny Bokin’ny Jobily dia miresaka sy mitantara ny ankamaroan’ny zavatra sy ny olona voalaza ao amin’ny [[Bokin'ny Genesisy|Genesisy]], nefa matetika dia misy tsipiriany fanampiny. Ahitana ny tantaran’ny famoronana sy ny tantaran’i Isiraely izay tantarainy manaraka fotoana voazara ka misy 49 taona isanisany avy atao hoe ''jobily''. Ny fotoana nanomboka tamin’ny Famoronana hatramin’ny [[Mosesy]] izay nandray ny soratra tao amin’ny tendrombohitra [[Sinay (tendrombohitra Baiboly)|Sinay]] dia misy jobily 50, analana ny 40 taona handehanana ao amin’ny tany efitra alohan’ny hidirana ao [[Kanaana|Kanana]] (na 2410 taona).
=== Ny amin’ny anjely sy ny devoly ===
Misy sokajin’[[anjely]] efatra voalaza ao amin’ny Bokin’ny Jobily: ny anjelin’ny fahatrehanafanatrehana, ny anjelin’ny fanamasinana, ny [[anjely mpiambina]] ny olona tsirairay ary ny anjely izay mibaiko ny zava-miseho eo amin’ny zavaboary. I [[Henoka]] (na Enoka) no olona voalohany nampianarin’ny anjely manoratra, sady nanoratra ny tsiambaratelon’ny haikintana (astronomia) sy ny fizotran’ny fotoana ary ny vanim-potoana eto amin’izao tontolo izao. Raha ny amin’ny [[demonolojia]] kosa ny fijerin’ny mpanoratra dia misy itovizany betsaka amin’ireo [[Boky deoterokanonika|soratra deoterokanonika]] amin’ny andron’ny [[Testamenta Vaovao]] sy ny [[Testamenta Taloha]].
Ny Bokin’ny Jobily dia mitantara ny fiavian’ny anjely tamin’ny andro voalohan’ny [[Famoronana]] sy mitantara ny fomba nahatonga ny anjely sasany ho [[Anjely potraka|potraka]] izay niray tamin’ny vavin’ny zava-mety maty, ka niteraka karazan’olon-goavambe atao hoe [[Nefilima]], avy eo nitaranaka ny atao hoe ''Elioud''. Ny dikan-teny etiopianan’ny boky dia manambara fa ireo anjely ireo dia taranaka tsy mpanoa nivoaka amin’i [[Seta]] (''Deqiqa Set''), fa ny vavin’ny zava-mety maty dia taranak’i [[Kaina]]. Ny zanaka vokatr’izany firaisana izany dia ny Nefilima izay niaina tamin’ny andron’i Noa ka naripaky ny [[safodrano]] lehibe. Ny Bokin’ny Jobily dia milaza ihany koa fa [[Andriamanitra (tokana)|Andriamanitra]] dia namela ny 10 isan-jaton’ny fanahin’ny Nefilima tsy manam-batana mba hampivily lalana ny olombelona taorian’ny safodrano.
=== Ny vadin’i Kaina sy i Seta ===
Ny Bokin’ny Jobily dia mampahatsiahy ny fanambadiana olo­m-pady nataon’ireo zanak’i [[Adama]] sy i [[Eva]], dia i Kaina sy ny vadiny ary i Seta sy ny vadiny. Ao amin’ny Jobily 4.1-12 dia voalaza fa naka ny anabaviny atao hoe Avena na Avàna (''Awan'') ho vadiny i Kaina ary i Henoka zanak’izy ireo. I Seta kosa dia nanambady ny anabaviny atao hoe Atsora na Azora (Azura).
=== Ny fiteny hebreo ===
Araka io boky io, ny [[fiteny hebreo]] no fiteny any an-danitra sady fitenenin’ny zavaboary rehetra tao amin’ny saha, na olona na biby; nefa very ny fahafahan’ny biby miteny tamin’ny nandroahana an’i Adama sy i Eva hiala avy ao amin’ny saha. Taorian’ny safodrano, ny tany dia voazara telo ho an’ireo zanak’i Noa sy ireo zafikeliny 16. Taorian’ny nandravana ny [[Tilikambon’iTilikambon'i Babela]], ny fianakavian’izy ireo dia niparitaka araka ny anjarany avy, ary ny fiteny hebreo dia hadino amin’izay ka tsy notenenina raha tsy nanomboka tamin’ny nampianaran’ny anjely azy indray an’i [[Abrahama]].
=== Ny Fanjakan’ny Mesia ===
=== Ny lalànan’i Noa ===
Ny Jobily 7.20-28 dia angamba filazana ny [[Lalàn’i Noa]] izay mihatra amin’ny olona rehetra:
Ny Jobily 7.20-28 dia angamba filazana ny lalàn’i Noa izay mihatra amin’ny olona rehetra: “Ary tamin’ny jobily faha-28 i Noa dia nandidy ireo zanany lahy hanoa ny didy sy ny lalàna ary ny fitsarana rehetra izay fantany sady namporisika ireo zanany lahy mba hanao ny marina, hanarona ny fahamenaran’ny vatany, hanamasina ny Mpamorona azy, hanaja ray sy reny, ho tia ny mpifanolo-bodirindrina aminy, hitandrin-tena amin’ny [[fijangajangana]] sy amin’ny tsy fahadiovana ary amin’ny herisetra rehetra. Fa noho ireo zavatra telo ireo no niavian’ny safodrano teto ambonin’ny tany … Fa izay mandatsaka ran’olona sy nihinana ny ra avy amin’ny nofo, dia tsy maintsy haringana tsy ho eto ambonin’ny tany”.▼
▲Ny Jobily 7.20-28 dia angamba filazana ny lalàn’i Noa izay mihatra amin’ny olona rehetra: “Ary“''Ary tamin’ny jobily faha-28 i Noa dia nandidy ireo zanany lahy hanoa ny didy sy ny lalàna ary ny fitsarana rehetra izay fantany sady namporisika ireo zanany lahy mba hanao ny marina, hanarona ny fahamenaran’ny vatany, hanamasina ny Mpamorona azy, hanaja ray sy reny, ho tia ny mpifanolo-bodirindrina aminy, hitandrin-tena amin’ny [[fijangajangana]] sy amin’ny tsy fahadiovana ary amin’ny herisetra rehetra. Fa noho ireo zavatra telo ireo no niavian’ny safodrano teto ambonin’ny tany … Fa izay mandatsaka ran’olona sy nihinana ny ra avy amin’ny nofo, dia tsy maintsy haringana tsy ho eto ambonin’ny tany”tany''”.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/970887"